[Karajia mivantana] Dingana manaraka ho an’ny tari-dalana fibilaogina miabo, 2 Desambra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2018 2:38 GMT
Miaraha aminay azafady amin'ny 2 Desambra 2010 mba hanao karajia momba ny “tetikasa sy tari-dalana antserasera momba ny fibilaogina miabo. Hanomboka amin'ny 11 atoandro ny karajia, ary raisinay am-pifaliana avokoa izay mpandray anjara vaovao, ary koa ireo namana izay efa nandray anjara tamin'ny resadresaka manerantany.
Hanomboka amin'ny 11 atoandro ora ATSINANANA (Boston-New York) ny karajia.
Amin'ny 2 ora hariva ny ao (Buenos Aires), 4 ora hariva (London), 6 ora hariva (Cape Town, Beirut), 7 ora hariva (Nairobi), 9:30 hariva (New Delhi), 12 atoandro (Dec 4) (Beijing, Manila), 1atoandro (Tokyo), 3 hariva (Sydney).
Roa taona lasa izay, naneho fahalianana lehibe tamin'ny taridalana momba ny famahanam-blaogy mikasika ny lohahevitra mifandraika amin'ny VIH/SIDA ny karajia tamin'ny Andron'ny VIH/SIDA Manerantany – notohanan'ny Rising Voices.
Ny tari-dalana antserasera (e-guide), “Blogging Positively,” dia navoaka tamin'ny herintaona, ary azo trohana ato. Ary ato raha hijery ny sarintanin'ny olona sy vondrona izay mibilaogy mikasika ny VIH / SIDA.
Satria natomboka ankehitriny ny torolàlana “Blogging Positively”, tianay ny mitady fomba hahatonga azy io ho ilaina araka izay tratra. Ahitana fampivoarana ny fandaharam-pampianarana izay hanaraka ny traikefa an-tanana, ny fanitarana ny torolàlana ahitana ireo karazana fampahalalam-baovaon'olon-tsotra hafa (“mibilaogy sy ankoatra izany”), ary lohahevitra hafa toy ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny VIH / SIDA ireo tolo-kevitra, ary mampifandray azy amin'ny karazana fifandraisana hafa, toy ny zavakanto.
Nanangana lisitra mety hisy ny “sehatra ho avy” izahay, ka anisan'izany:
* Manangona ny fomba fanao tsara indrindra ary manampy bilaogy ao amin'ny sarintaninay tsy mitsaha-mitombo.
* Famaritana ny fomba hampandraisana anjara ny olona monina any amin'ny faritra tsy dia misy aterineto.
* Mampiditra olona sy vondrom-piarahamonina bebe kokoa voakasika mivantana amin'ny VIH / SIDA, ary manome hery ireo bilaogera mitondra ny VIH.
* Mikarakara fikambanana iraisam-pirenen'ny bilaogera ao an-toerana mifantoka amin'ny VIH / SIDA.
* Mamorona fanentanam-piarovana sy ekipa “famahanam-bilaogy momba ny krizy” hananganana toeram-pivoriana manerantany.
* Mametraka fandaharam-pampianarana momba ny mediam-bahoaka sy ny VIH / SIDA.
* Fitantarana ataon'ny olona sy momba ny olona voan'ny VIH/SIDA.
* Mampiroborobo ny fanentanana fanabeazana ara-pahasalamana.
* Mandrisika ny fampiasana fampahalalam-baovaon'olo-tsotra hafa ankoatra ny bilaogy sy ny aterineto.
Ny karajia amin'ny 2 Desambra dia hifantoka amin'ny fanangonana fanehoan-kevitra momba ny toro-lalana antserasera sy ny tetikasa, mamorona fandaharam-pianarana, ary ny sasany amin'ireo lohahevitra voatanisa etsy ambony (raha misy ny fotoana). Antenaina fa afaka miaraka aminay ianao!